Uhlu Lwezingcingo Zebhizinisi LaseJalimane | Database lakamuva Lokuposa
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwezinombolo zebhizinisi laseJalimane
Izinombolo zefoni yaseJalimane
Sivuselela uhlu lwezinombolo I-Germany Business Ucingo Uhlu Yonke idatha Yenombolo Yeselula enikezwe yithi iyiqiniso futhi iyaqinisekiswa. Siyi-100% Ikhwalithi Yenombolo Yeselula Yekhwalithi Yokuhlinzekelwa Kwamasheya Yabanikezeli 95% + Eqondile Ukunakekelwa. Singabahlinzeki bemininingwane engcono kakhulu emhlabeni wonke futhi sinikezela ngenombolo yocingo kanye nohlu lwe-imeyili.
Uhlu oluhle lwezingcingo luzoba nabantu oxhumana nabo abahlelwe ngamakhodi wezwe, ikhodi yeposi, ikhodi yendawo, idolobha kanye nesifundazwe. Ngokubhalwa Kwamaphepha Okuresa Kakhulu ukuthumela uhlu lwezinombolo zocingo kanye nezindlela ezinhle kakhulu ze database, uzokwandisa kakhulu amathuba iqembu lakho elizophumelela esikhathini esifushane nangesikhathi eside.
Thenga iJalimane B2B Izinombolo Zenombolo
Inani Lamarekhodi: 14,000
UHLU LWEZIMALI LWEGIBHITHE LAMAHHALA
Uhlu lwefoni yebhizinisi laseJalimane luyindlela ephumelelayo yokuxhumana nabathengi futhi uthole impendulo esheshayo. Ukusebenzisa izinhla zefoni yebhizinisi eliqondiwe kuzokusiza ukukhulisa ibhizinisi lakho ngamathuba wokuthengisa angeziwe.
Izingxoxo zocingo ziyindlela enhle yokufinyelela iklayenti lakho elizayo lokumaketha umuntu noma inkampani futhi ifinyelele izinhloso zakho zokuthengisa. Idatha ethembekile ingasiza abathengi bakho ukuthi bagweme ukuchitha isikhathi nemali njengoba usebenzela ukuba nezingxoxo ezakhayo namakhasimende amasha. Uhlu lwezincwadi zebhizinisi laseJalimane lunakho konke okufisayo. Ukuthengisa ngocingo, ukumaketha kwe-sms noma ukubiza kubanda kuyindlela enhle yokuthengisa imikhiqizo enjenge-e commerce, izikhungo zokushayela ucingo namanye amabhizinisi aku-inthanethi noma angaxhunyiwe ku-inthanethi.
Uhlu lwefoni yasebhizinisi laseJalimane kusuka eDatabase Lokulanda Nge-Mailing liqukethe imininingwane e-14,000 ehlanganisiwe yohlu lwefoni yebhizinisi olufika ku- $ 1,050, inkokhelo yesikhathi esithile kanye nesoftware engenzekayo engaba uhlobo lwefayela le-Excel CSV.
Database Lokugcina Lokuposa lizokunikeza konke okudingayo ngohlu lwefoni yebhizinisi. Uhlu lwezinombolo zebhizinisi laseJalimane lunedatha eyi-90% eyiqoqo eqongelelwe ngabasebenzi bethu ukwenza abathengi bakho abaqondiwe batholakale kalula, bazothintana ngokungasebenzi futhi bangathengisa kalula. Ukwenza ibhizinisi lakho linwebeke, liguquleke futhi kube yindlela enhle yokwenza ibhizinisi lakho liphumelele kakhudlwana.
EGermany B2B Inombolo Yefoni Ihluza Umbuzo Nempendulo